Ergada Shirka Cadaado oo ku kala aragti duwan dhismaha Maamulka Mudug iyo Galgaduud, | warsanradio baydhabo
Home WARARKII MAANTA	Ergada Shirka Cadaado oo ku kala aragti duwan dhismaha Maamulka Mudug iyo Galgaduud,
written by warsan radio 13/05/2015
Ka qeybgalayaasha Shirka Cadaado, ee dhismaha Maamulka Mudug iyo Galgaduud ayaa wali ku kala qeybsan hanaanka dhismaha Maamulka, Dadka ka qeybgalaya Shirkaan ayaa qaarkood waxa ay u arkaan Shirka in uu u socdo si wanaagsan, halka kuwa kalana ay ka cabanayaan faragelin ay sheegeen inay ku heyso dowladda.
Cali deeq Maxamed Xaashi iyo Mahad Maxamed Faarax oo ka mid ah Dadka taageersan kaalinta dowladda ay ku leedahay dhismaha Maamulka, ayaa sheegaya in sida uu u socda Shirka ay urkaan waddo lagu gaari karo Dowladnimo, iyaga oo dowladda ku amaanay doorkeeda.
C/wahaab Sheekh Yuusuf iyo Xuseen Cali ayaa qaba aragti kasoo horjeeda kuwa taageersan Shirka Cadaado, waxaana ay sheegeen in Dowladda ay kala qeybineyso Beelaha, iyaga oo Guddiga farsamada ku tilmaamay guddi u shaqeeynaya Dowladda oo aan ka turjumeyn baahidooda.
Wasiirka arrimaha gudaha oo shalay gaaray Magaalada Cadaado ayaa sheegay in qorshaha uu halkaasi u tagay ay ka mid tahay in uu dhageysto cabashada Odayaasha si aragti mideysan looga yeesho dhismaha Maamulka Mudug iyo Galgaduud.
Ergada Shirka Cadaado oo ku kala aragti duwan dhismaha Maamulka Mudug iyo Galgaduud, was last modified: May 13th, 2015 by warsan radio
Dhageyso:-Wareysi aanu Layeelanay Xildhibaan Cumar Balash Mooshinkii Maanta Baaqday
Shirka Baledweyne oo galay wajigiisa labaad, ee dib u heshiisiinta Beelaha dega Hiiraan